DEG DEG: Kylian Mbappe oo Kooxdiisa Paris Saint-Germain u sheegay inuu ka tagayo haddii… – Gool FM
DEG DEG: Kylian Mbappe oo Kooxdiisa Paris Saint-Germain u sheegay inuu ka tagayo haddii…
Haaruun October 5, 2019
(Paris) 05 Okt 2019. Kylian Mbappe ayaa la soo warinayaa inuu kooxdiisa Paris Saint-Germain u gudbiyey warqad codsi ah oo uu ugu sheegayo inuu ka tagayo xagaaga soo socda haddii aysan xilli ciyaareedkan ku guuleysan Koobka Champions League.
Mbappe ayaa qandaraaskiisa kooxda reer France waxaa uga harsan illaa iyo dhammaadka xilli ciyaareedka 2021-22, wararka xanta ah ee dhowaan soo baxayey ayaa sheegayey inuu mustaqbalka u wareegayo dhinaca Naadiga Real Madrid.
Sida ay sheegayaan wararka laga helayo dalka Spain, xiddiga ku guuleystay koobka Adduunka ayaa diyaar u ah inuu muujiyo rabitaan ah inuu tartan kale ka galo meel kale haddii kooxdiisa PSG aysan soo afjarin rajadooda sugitaanka ku guuleysiga Champions League.
In kastoo ay lacag badan qarash-gareeyeen milkiilayaasha naadiga, haddana kooxda PSG wali kama aysan soo bixin wareegga quarter-finalka ama siddeed dhammaadka sanadihii ugu dambeeyay, taasoo sida la sheegay keentay in ciyaaryahanku uu dalbado inuu tago haddii kal ciyaareedkan ay ku guuleysan waayaan Champions League.
Kooxda heysata horyaalka faransiiska ayaa hadda ku jirta waddadii ay ku gaari lahayd wareegga 16-ka koobka horyaalladda Yurub kaddib markii ay guuleysteen labadii kulan oo ay ciyaareen heerka guruubyada tartankan, waxaana ay shan dhibcood ka sarreeyaan kooxda Real Madrid oo ay ku wada jiraan Guruubka A ee Champions League.
Mbappe ayaa dhaawac ku seegay kulankii kooxdiisa PSG ay guusha 3-0 ka gaartay Los Blancos bishii hore.
Kooxda Manchester United oo ku raad-joogta Weeraryahan Ruush ah… (Macallin Ole oo qiimo jaban ku heli kara laacibkan)
Kahor kulanka habeen dambe ee Barcelona iyo Sevilla… (BAl EEG Rikoodhka naxdinta leh uu Messi ka heysto kooxda Sevilla)